Malunga nathi - Dongguan Chengda ngerabha & Plastic Technology Co., Ltd.
Inkampani ngokungqongqo yenza ulawulo lwemveliso kunye nolawulo lweenkqubo ezahlukeneyo zemveliso ngokungqinelana neemfuno zenkqubo esemgangathweni ye-ISO yamanye amazwe. Inkampani inenkqubo ebanzi yolawulo kuyilo lwemveliso, uphando kunye nophuhliso, ukubumba uphuhliso, izinto ezingavuthi, itekhnoloji yokuvelisa, ukuphuculwa komgangatho weenkqubo zemveliso, ukugcwalisa izixhobo zekhompyutha, ukuzinza komgangatho. Emva kweminyaka emininzi yophuhliso, iimveliso zenkampani zithengiswa eTshayina. Abavelisi abaziwayo bathembekile, kwaye bathunyelwa e-United States, kwi-European Union, kwi-mpuma ye-Asiya nakwamanye amazwe kwaye bafumana udumo kubathengi.
Samkela i-OEM okanye i-ODM, kwaye sinikezela ngenkxaso yezobuchwephesha kunye nenkonzo ethembekileyo, ngezantsi kwezona zinto zibalulekileyo.
1. Uyilo lweMveliso kunye nesampula ekhawulezayo.
2.Ukuyilwa komngundo kunye nokungunda.
3. Ukukhethwa kwezinto kunye nophuhliso.
4. Ukubumba i-silicone kunye ne-rubber yokubumba kunye ne-injection molding.
5. Indibano yemveliso.
6. Inkxaso yokupakisha ngokwesiko.
Imfezeko, ukubeka emgangathweni, ukuvelisa izinto ezintsha, umbulelo.
Ukusebenza okusemgangathweni, ukugxila kobungcali, ukuvelisa izinto ezintsha, umgangatho wokuqala.
Lungiselela intengiso ngeetalente, phuhlisa intengiso ngetekhnoloji, kwaye uphumelele abathengi ngomgangatho.
Iimveliso eziMgangatho oPhakamileyo + amaXabiso oKhuphiswano + Ixesha lokuTshintsha ngokukhawuleza + Inkonzo yabaThengi egqibeleleyo
Ukuba netekhnoloji yemveliso ekhokelayo, abasebenzi abanamava aphezulu, banokuba nolawulo oluhle kakhulu kwiindleko zokuvelisa.
Injongo yethu kukuvelisa iimveliso ezisemgangathweni, ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu baya kwabelana ngamava abo kwaye basebenze nathi. Isatifikethi esithile: I-SGS, i-FDA, i-RoHs ziyafumaneka.
IXESHA LOKUJIKELELA NGOKUGQIBELA
Ukuveliswa kwemveliso ngokufanelekileyo, kudityaniswa nokuba bhetyebhetye kwabasebenzi, kuyinciphisile imeko yethu yokuvelisa, siqinisekisa ukuhanjiswa kwangexesha. Songeza ukufikelela kwethu kwimveliso, ukwenza lula inkqubo yoku-odola.
Ukuphulaphula kakuhle abathengi bethu abaziwayo ngempendulo yabo kunye nezimvo zabo kunye nemibuzo evela kubaxhasi bethu abatsha basenze sakwazi ukuziqhelanisa ngcono nokuphucula umgangatho wenkonzo. Ke ngoko, sinokuhlangabezana ngcono neemfuno zabaxumi bethu.
Wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu buqu, thumela imibuzo yakho kwi-imeyile yethu, okanye usitsalele umnxeba nangaliphi na ixesha! Enkosi ngenkxaso yakho, inkxaso, ukuthembela kunye nentsebenziswano.